शिव— जो बिन्दास छन्, सबैका प्रिय छन् ! -
#१ शिवः सर्व-समावेशी— जोसुकैसँग घुलमिल हुन सक्छन् !
सद्‌गुरु: देवताहरूले मात्रै शिवको पूजा गर्ने होइन; राक्षस, पिशाच र सबैथरीका प्राणीहरूले शिवको उपासना गर्छन् । अरू सबैले उपेक्षा र अस्वीकार गरेका ती सबै— भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य— लाई शिवले स्वीकार गर्दछन् ।
परम्परा अनुसार यस्तो व्याख्या गरिएको छ कि जब उनको बिहे भयो— जो केही थिएनन्, जो केही थिए अनि जो सबैथोक थिए— ती सबै त्यस विवाहमा उपस्थित थिए । सबै भगवानहरू र दिव्य जीवहरू, सबै असुरहरू, दानवहरू, विक्षिप्त प्राणीहरू, राक्षस र भूतहरू— सबैजना उपस्थित थिए । सामान्यतया, यिनीहरू सँगसँगै रहन सक्दैनन् । तर, शिवको विवाहमा हरेक कोही त्यहाँ थिए । शिव “पशुपति” हुन् अर्थात् पशु प्रकृति वा पशु प्रवृत्तिको अधिपति हुन्, त्यसैले सबै प्राणीहरू त्यहाँ आए । अनि, पक्कै पनि सर्पहरूले त छुटाउने कुरा नै भएन, त्यसैले तिनीहरू पनि आए । च‍राचुरूङ्गी र किरा–फट्याङ्ग्राहरूले समेत यसलाई छुटाउन चाहेनन्, त्यसैले उनीहरू पनि पाहुना थिए । त्यस विवाहमा प्रत्येक जीवित प्राणीको उपस्थिति थियो ।
सद्‌गुरुः सामान्यतया, शिवलाई परम–पुरुषको प्रतीक मानिन्छ, तर तपाईंले शिवको अर्धनारीश्वर रूपमा यो देख्न सक्नुहुन्छ कि उनको आधा भाग पूर्ण विकसित नारी हो । म तपाईंलाई के भएको थियो भनेर कथा बताउँछु । शिव परम–आनन्दको अवस्थामा थिए, र यसैकारण पार्वती उनीतर्फ आकर्षित भइन् । पार्वतीले शिवलाई रिझाउन अनेक किसिमका तरिकाहरू अपनाइन्, सबैथरीका सहयोगहरू खोजिन्— र अन्ततः उनीहरूको विवाह भयो । उनीहरूको विवाह भएपछि, स्वाभाविक रूपमा शिवले पार्वतीसँग आफूले अनुभव गरिरहेको कुरा बाँड्न चाहे । पार्वतीले भनिन्, “तपाईं आफूभित्र जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, म पनि त्यसलाई अनुभव गर्न चाहन्छु । त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ ? कृपया मलाई बताउनुहोस् । म जस्तोसुकै तपस्या गर्नको लागि तयार छु ।” शिव मुस्कुराए अनि भने, “ प्रिय, तिमीले कुनै ठूलो तपस्या गर्न आवश्यक छैन । तिमी यता आऊ अनि मेरो काखमा बस ।” पार्वती आइन् अनि नहिचकिचाइकन शिवको बायाँ काखमा बसिन् । उनी पूरै इच्छुक थिइन्, उनले आफूलाई पूर्ण रूपमा शिवको हातमा सुम्पिएकी थिइन्, र यसैले गर्दा शिवले उनलाई आफूभित्र ताने अनि उनी शिवको आधा भाग भइन् ।
एक इजरायली वैज्ञानिकले कैयौँ वर्ष लगाएर मानिसको मस्तिष्कलाई अध्ययन गरे अनि उनले यो पत्ता लगाए कि मानव मस्तिष्कमा लाखौँ सङ्ख्यामा नशा ग्रहण गर्ने कोषहरू हुन्छन् ! त्यसपछि न्युरोलोजिस्ट (स्नायु तन्त्रको विज्ञ) हरूले पत्ता लगाए कि यी कोषहरूलाई तृप्त गर्नको लागि शरीरले एउटा रसायन— आफ्नै नशा— उत्पन्न गर्न सक्छ । जब उनीहरूले त्यो रसायन पत्ता लगाए, उनीहरूले यसलाई सटीक नाम दिन चाहे । जब ती वैज्ञानिकले यो विशेष रसायनलाई नाम दिन चाहे, उनले विविध शास्त्रहरू हेरे । यो थाहा पाउँदा उनी चकित परे कि पूर्वीय शास्त्रहरूमा मात्र “आनन्द” को बारेमा चर्चा गरिएको छ । त्यसैले, उनले त्यस रसायनलाई “आनन्दमाइड” नाम दिए ।
सद्‌गुरुः जब तपाईं “शिव” भन्नुहुन्छ, यो कुनै धर्मको बारेमा होइन । अहिले यो संसार धर्मको आधारमा विभक्त भएको छ; तपाईं कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनेर विभाजित छ । यसैकारण, यदि तपाईंले केही उच्चारण मात्रै गर्नुभयो भने पनि, यस्तो ठानिन्छ कि तपाईं कुनै धर्म अन्तर्गत पर्नुहुन्छ । यो कुनै धर्म होइन; यो आन्तरिक विकासको समग्र विज्ञान हो । यो भौतिकताबाट पर जाने अनि मुक्ति पाउने बारेमा हो । यसले केही फरक पार्दैन कि तपाईंको वंशाणु के हो, तपाईंका पिता को थिए, अथवा तपाईं केके कमजोरीहरू लिएर जन्मिनु भएको थियो वा पछि गएर जम्मा गर्नुभयो— यदि तपाईं प्रयास गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं यी सबैबाट माथि उठ्न सक्नुहुन्छ !
मेरो कामना छ कि महाशिवरात्रीको रात तपाईंको लागि जाग्राम बस्ने रातमात्र नबनोस्— यो रात तपाईंहरूका निम्ति तीव्र जीवन्तता र चैतन्य जागृतिको रात बनोस् । मेरो कामना र आशीर्वाद यही छ कि प्रकृतिले यसदिन प्रदान गर्ने यो विलक्षण उपहारलाई तपाईं उपयोग गर्नुहोस् । म आशा गर्छु तपाईंहरू सबै यो उर्जाको प्रवाहलाई सवारी गर्नुहुनेछ, अनि त्यसको सुन्दरता र परम–आनन्दलाई जान्नुहुनेछ, जसलाई हामी “शिव” भन्दछौँ !
आदिगुरु शिवलाई सप्तऋषिहरूले के गुरु दक्षिणा…
तर, जानुअघि आदियोगी शिवले आफ्ना सात शिष्यहरू अर्थात् सप्तऋषिहरूसँग गुरु दक्षिणा मागे । आउनुहोस् हेरौँ,…	Goto page